आमा दिवस-आमा चारधाम
अणु आकारको बीजले आणविक मान्छे अंकुराउ“छ । भूदेवी, पानी, अग्नि, वायु र आकाश बन्छ । यही पञ्चतत्वमा प्रकृति छ, प्रकृतिको अलौकिक सुन्दरता, सिर्जना र समन्वय छ । समष्टि छ ।
कत्रो आश्चर्य, बीजस“गै व्यापकता बढ्छ । बीजमा सम्पूर्णता अट्छ ।
अचम्म छ, बच्चा जन्मने बेलामा आमा फक्रिन्छिन्, आमाको छाती रसाउन थाल्छ । जब बच्चा जन्मिन्छ, छातीमा टा“स्नासाथ आमाको छातबाट दुधको धारा बर्सिन थाल्छ । बीजस्तारै बच्चाका दा“त पलाउन थाल्छन्, ऊ ठोस खाद्य खान सक्ने हु“दैजान्छ, आमाका दूधका धारा सुक्दै जान्छन् । आमा उमेरले नेटो काट्दै जा“दा सन्तान बालकबाट तन्नेरी हु“दै जान्छ । ऊ प्रौढ भएर वृद्धतिर लस्कि“दा तिनका पनि नया“ सन्तान हु“दै जान्छन् । पुराना पात झर्छन्, नया“ पलाउ“छन् ।
सृृष्टि पनि बीज, दृष्टि पनि बीज, सुरू पनि बीज, अन्त पनि बीज । युधिष्ठिर पनि बीज, दुर्योधन पनि बीज । अर्जुन पनि बीज, कृष्ण पनि बीज । आस्तिक पनि बीज, नास्तिक पनि बीज । बल पनि बीज, निर्बल पनि बीज । मानवीय मर्म मार्गको सुुक्ष्म संवेदना आमा । समयको सुई हुन् आमा ।
आमा छिन् र बीज छ । बीज छ र संसार छ ।
जन्मदाताले जन्म दिन्छिन्, बितेर जान्छिन् । तर आमाको रूपमा जन्मभूमिले हरेक सन््तानलाई जीवनभरि छातीमा टाँसिरहन्छिन् । हरेक पुस्ताले गर्ने कर्म आमा र आमारूपी जन्मभूमिकै सेवा हो । पाउने आमाकै आशीर्वाद हो । जन्म दिने आमाको गर्भदेखि चितासम्म लम्पसार पर्ने छाती आमाकै हो, यही सेरोफेरो हो मान्छेको इहलीला ।
यो जीवनलीलालाई कसरी र कति सुन्दर, शान्त, शुभ्र र सुकिलो बनाउने त्यसको शिरोभारो सन्तानको का“धमा हुन्छ । मान्छे जन्मन्छ र मर्छ, हावामा बिलाउ“छ, माटोमा मिल्छ । मान्छेका असल कर्म अमर हुन्छन्, इतिहासमा बाँच्छन् र सम्झनामा नाच्छन् ।
कति रहरलाग्दो जीवनलीला हुन्छ तिनको जो भूमिपुत्रपुत्री हुनसक्छन् । त्यस्तो रहरलाग्दो जीवन खोज्ने संवेगको खा“चो छ वर्तमानलाई । माझी त्यही हो, जसले जीवनडुङ्गालाई जन्मदातादेखि जन्मभूमिको बहाना खियाएर सकुशल पारि पुग्छ ।
जो आफैप्रति इमानदार छ, ऊ आमाको होनहार सन्तान हो । त्यो अनमोल रत्न सन्तानले आमाले दशधारा दूध चुसाएको र छाती कुल्चाएको उसले ऋण ति¥यो । जो आमाप्रति बेइमानी गर्छ, ऊ हा“सीखुसी देखिए पनि कपुत्र कुपुत्री हो ।
यो संस्कृत श्लोक ऋषि भारद्वाजले मर्यादापुरूषोत्तम रामलाई सम्बोधन गर्दै भनेका हुन्– एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक हो यो । यो हाम्रो समाजमा आदर्श वाक्यका रूपमा पनि स्थापित छ । यस वाक्यको अर्थ हुन्छ–
‘मित्र, धन , धान्य आदिको संसारमा उच्च सम्मान गरिन्छ । तर आमा र मातृभूमिको स्थान स्वर्गभन्दा पनि माथि छ ।’
‘लक्ष्मण’ यो लङ्का सुनैसुनले बनेको भए पनि मलाई यसमा कुनै रूचि छैन । किनकि जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन् ।
आमा ः जन्मदाता आमा, जन्मभूमि आमा । बीजहान–साँझको आरती आमा, मन्दिरमा पूजा र प्रार्थना आमा । मानवीय संसारको सारथी आमा । जहाँ आमा उहीँ श्री । दिन आमा, रात आमा । सूर्योदय आमा, चन्द्रोदय आमा । अँध्यारो जीवनको जुनकिरी आमा । मन, वचन र कर्म आमा । घरदेखि घाटसम्म आमा । बाँचुञ्जेल आमा भनेर बाँच्न पाइयोस् । मर्दा आमा भनेर मर्न पाइयोस् ।
हरेक किहानको चुल्हो आमा, हरेक रातको मीठो निन्द्रा आमा । उध्रिएको चोली आमा, फाटेको फरिया आमा । नाङ्गो पैताला आमा, प्राणीभित्रको रगत आमा । रगतभित्रको जीवन आमा । सर्वकालिक आशीर्वाद आमा ।
हामीले जन्मदाता, जन्मभूमिको मुहारमा खुशी दियौं कि दिएनौं ? आमालाई घोचेका घाउहरूका पीडा लियौं कि लिएनौं ? मरेपछि मातातीर्थ वा कुनै तीर्थ जानु, तर्पण, श्राद्ध, पिण्ड र सम्झना गर्नु भन्दा आमा बाँच्दैमा स्याहार ग¥यौं कि गरेनौं, आमासँग मीठो दुई शव्द बोल्यौं कि बोलेनौंं ? आमासँग मन खोल्यौं कि खोलेनौं ? किनकि आमा पूजा सामग्री, आमा सप्ताह, आमा चारधाम, कोटिहोम आमा ।
मान्छेका विपना आमा, सपना आमा हुनुपर्ने हो । आमाहरू घरबाट फालिएका छन्, मानौं फोहर हुन् आमा । आमाहरू बृद्धाश्रम पु¥याइएका छन्, मानौं अनावश्यक वस्तु हुन् आमा । आमाहरू सीमा, सरकार, समाज यत तत्र सर्वत्र गाली बनेकी छिन्, मानौं आमा भनेको लुट्नकै लागि सिर्जना भएकी हुन् । आमाहरूले यसरी रूनुपर्ने ?
हामीले जन्मदाता र जन्मभूमि आमा चिन्ने कहिले ? भनिन्छ, चरित्रको मूल्य बराबर कुनै वस्तुको मूल्य छैन । हामीले आफंैभित्र आफ्नो चरित्र खोज्न सकेनौं भने जीवनको मूल्य कसरी प्राप्त गर्नसक्छौं ?
कस्तूरी आप्mनै नाभिमा रहेको बीजनाको सुवास खोज्दै यत्रतत्र दौडिरहन्छ । हामी पनि सुख, स्वर्ग खोज्न आमा छाडेर भौँतारिइहेका छौं । आमाको सेवामा सन्तुष्टि छ, आमाको पैतालामुनि सुखस्वर्ग छ भन्ने नबुझेर गल्तीपछि गल्ती गरिरहेका छौं । स्वर्ग टपक्क टिपेर थपक्क राखेजस्तो यति रसिलो धर्ती, विश्वले शान्ति र शिखर भएको अनुपम भूमि भनिरहेको छ, हामी नारीचुलीको महिमा भुलिरहेछौं ।
हरेक विहान सूर्यको लालिमासँगै उदाउने र साँझ बत्ती जगाएर शान्त निदाउने हाम्रो मगमगाउँदो जन्मभूमि हाम्रै अन्धोपनले रोगाउँदै जाँदो छ । स्वयम्भूका त्रिनेत्र शान्ति भनिरहेछन्, परेवा शान्तिको सन्देश छरिरहेछ, क्रान्तिको कुराले भ्रान्तिका कुहिरो र तुवाँलो बाक्लिैदै जाँदो छ । हिमाल आमा आफैं पग्लेर निरन्तरको आशीर्वाद बगिरहेको मुलुकका सन्तान आमासँग टाढिंदै छन् । आमा, सरापमोचन हुन्, शवरी बनेर मर्यादापुरूषोत्तम रामको प्रतीक्षा गरिरहेजस्तो लाग्छ । आमा शवरी र सन्तान हामी, हे पूर्ण प्रमात्मा, दोष हामीमा छ, हामीलाई दोषमुक्त हुने सद्बुद्धि देऊ ।
साक्षात् देवी भनेको एउटै छिन्– जन्म आमा र जन्मभूमि आमा । माटो बाँचेको छ, माटो बाँचे आमा बाच्छिन् ।
प्रत्येक सन्तानले नेपाल आमा बुझेका छन् । आमालाई मुटुमा पनि राखेका छन् । मात्र आमाको खुशी खोज्न र सुरक्षामा लाग्न घण्टाघरले सन्तानहरूलाई घचघच्याइरहेको छ ।
यो पुस्तकमा लेखिएको विषय यिनै हुन् । महाभारतमा भीमका नाति, घटोत्कचका छोरा बर्बरिक यस्ता महाबली पात्र थिए जसले कमजोर पक्षबाट युद्ध लड्ने बचन दिएका कारण श्रीकृष्णले बर्बरिकलाई चण्डीलाई आत्मबलि दिन प्रेरित गरे । उनका दुई इच्छा थिए– उनको शवलाई श्रीकृष्णले जलाउनु पर्ने र महाभारत युद्ध प्रत्यक्ष हेर्ने । त्यसपछि उनको शिरलाई पहाडको चुचुरोमा राखेर श्रीकृष्णले १८ दिने महाभारत युद्धको प्रत्यक्षदर्शी बन्ने सौभाग्य दिएका थिए । युद्ध समाप्तिपछि उसलाई सोधियो– यो युद्ध जित्नुमा कसलाई श्रेय जान्छ ? बर्बरिकको जवाफ थियो– अहंकार सबै पाँचै पितामहमा थियो । नियम सबैले तोडेकै हुन् । महाभारतमा निर्णायक कोही थियो भने श्रीकृष्ण र श्रीकृष्णको सुदर्शनचक्र मात्र थियो ।
२०१२ सालदेखि २०७७ सालसम्मको समय र समाजको साक्षी– बर्बरिकजस्तै हो यो पुस्तक । आमाको सेवाभन्दा अर्को ठूलो धर्म छैन । किनकि, झुत्री, मैली जस्ती भए पनि आमा भनेकी आमा नै हुन् । प्रश्न यत्ति मात्र हो कि हामीले आमाको महत्व बुझ्ने कहिले ?